Bhuwan Chaulagain 26 March 2022
अरु देशको कुरा गर्ने हो भने महिला राष्ट्रपति भएको देशमा महिलाहरुको हक हितको बारैमा सबैभन्दा बढी बहस हुन्छ । उनीहरुको सुरक्षालाइ प्रथामिकतामा राखिन्छ । सडक देखि सदन सम्म पनि महिला अधिकारको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ र राज्यबाट महिलाहरुलाइ सुरक्षाको पनि व्यवस्था हुन्छ ।
तर हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने धेरै समय महिला राष्ट्रपनि भएको र सबै भन्दा महिला हिसां बढी भएको देश भनेर भन्दा फरक नपर्ला । वि.सं.२०७२ सालमा संविधान घोषणा पश्चातको संसदको निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा विद्या देवी भण्डारी पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भइन् ।
महिला राष्ट्रपति भएपछि सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरुमा फरक खुशी छायो । सबैलाइ लाग्यो महिला राष्ट्रपति भएपछि महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठने छ, महिलाहरु पिडामा पर्नु पर्ने छैन ,महिला हिंसा गर्ने अपराधिलाइ कडा कारबाही हुनेछ । भनिन्छनि हामीले जे सोचिन्छ त्यो कुरा हुन्न भनेर । महिला राष्ट्रपति भएकै देशमा प्रतिदिन महिला हिंसाहरु बढीरहेका छन । १२ वर्षिय बालिका दाई÷भाईद्वार बलात्कृत,९ वर्षिय बालिका आफ्नै बाउबाट बलात्कृत,५ वर्षिय बालिका बलात्कृत,१३ वर्षिय बालिका बलात्कृत,दाइजोको नाममा श्रीमतीको हत्या,पानि छोएकैं निउमा महिलाई कालोमोसो दलियो । यस्ता प्रकारका घटनाहरु प्रत्येक दिन घटिरहेका छन ।
केही दिन पहिले १८ महिले नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या भन्ने घटना बाहिरियो जुन घटनाले सरकार तथा कानुन प्रशासन माथि विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन । कहा सुतेर बसेको छ नेपाली कानुन ? कहा गुप्त छन महिला हक हितको लागी आवाज उठाउने सघं सस्थाहरु ? के हेरेर बसेको छ सरकार ? महिला राष्ट्रपति भएकै देशमा सबैभन्दा बढी किन महिला पिडित ?
२०७२ साले देखिको बलात्कारको घटना हेर्ने हो भने हरेक वर्ष बलात्कारको घटना बढ्दो दरमा छ ।
२०७२ देखि २०७७ सम्मका यस्ता छन बलात्कारका घटनाहरु :
०७२/७३ — १०९३
बलात्कारको घटनामा सबै भन्दा बढी पिडित २० वर्ष भन्दा मुनिका नाबालिकाहरु छन । हामी सबैको मनमा विभिन्न प्रश्नहरु खडा भएका छन । के हाम्रो देशमा महिलाहरु सुरक्षित छन त ? के हाम्रा दिदि बहिनीहरुलाइ एक्ले बजार वा मेलापात गर्न ढुक्क भएर पठाउन सकिन्छ त ? के आमाहरुले स्वतन्त्ररुपमा छोरी पाउने अधिकार छ त ? यस विषयमा सरकारले गहनरुपमा सोच्न पर्ने छ । नत्र सबै आमाहरुले छोरीलाइ जन्म दिन आफैलाइ धिर्काने पर्ने छ ।